Basaska 3 E ee caanka ah ee iibka ah - Buuxin Baahiyahaaga | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News 3 Baaskiil Caan ah Oo Iib Ah - Baahi Baahidaada
Taariikhda ： 2020-07-22 Qeybaha ：News Muuqaalada ： 2,260 aragti
Lahaanshaha baaskiilku wuxuu kuu horseedi karaa inaad raacdo dheer, dhakhso iyo dheer. Ku guurista baaskiil koronto ayaa ah fursadda ugufiican ee lagu qoro qoraxda oo lagu raaxeysto nashaadaad xagaaga. Muddooyinkaan dambe, nashaadaadyada bannaanka ka socda sida iskeetarka korantada, mootada qaan-gaarka iyo bushkuleetiga isku-dhafka korantada, ayaa caan ku noqday dhammaan kooxaha bulshada. Oo kanuna waa sababta e baaskiil iib ah cirka isku shareertay? Sababtoo ah hadda, baaskiil kasta wuxuu u eg yahay mid casri ah oo xirxiraya awood ku filan oo kugu qaadan doonta 40 ilaa 60km hal kharashaad.
Marka, noocee ah baaskiilada e ee iibka ah ayaa ku habboon macaamiishaada markay tixgelinayaan inay iibsadaan baaskiil koronto? Tani waa su'aal aasaasi ah. Jawaabtu waxay saameyn ku leedahay xulashada baaskiilka e. Sideed ku dooran kartaa noocyada baaskiilka e suuqaaga weyn? Waxaa jira waxyaabo badan oo laga doorto ebikeynta caadiga ah ee magaalada, buuraha buuraha ama xitaa laalaabka ebike. Boostadani waxay kugula talin doontaa 5 baaskiil caan ah oo iib ah.
1. Baaskiil qarsoon oo elektiroonig ah
Iyada oo la dhiso baaskiil buur caadi ah oo lagu daro nashqadeynta batteriga qarsoon - cidina xitaa ma ogaan doonto inay koronto tahay. Guud ahaan waxay umuuqataa mid awood badan, sifiican u dhismeed iyo ciyaar leh. Kani waa mid ka mid ah baaskiilada elektaroonigga ah ee iibka ah oo kaa kaxayn doona guriga ama xafiiska oo u kaxayn doona isboorti dibadda ah. Waxaa jira waxyaabo badan oo naxdin leh oo laga qaado aluminium aluminium fargeeto hore, iyo 26-inch wheel, xitaa 27.5 ″ iyo 29 ″ giraangiraha ayaa ka caawiya baaskiil wadooyin kala duwan oo kala jaban si fudud.
Batarigan 36V 10AHlithium waa mid la saari karo, sahlanaanta sidoo kale waa mid ka mid ah mudnaanta batteriga. Way fududahay in lala baxo furaha, oo aad u qaaddid meel kale oo aad lacag ka qaadatid adigoon dhaqaajin baaskiilka e. In kasta oo nidaamka qalabka uu ka mid yahay kuwa ugu fiican ganacsiga, qiyaasta caadiga ah waa 21 gear. Sidoo kale, bareegyada diskiga hore-dambe waa kuwo si habsami leh waxtar u leh, oo kuu keenaya joogsi ammaan ah xitaa xawaaraha. Xawaaraha ugu badan waa 25km / h ilaa 35km / h marka loo eego awoodda kala duwan ee 250w ilaa 500w motor. Iyo haddii macmiilkaagu jecel yahay inuu la socdo raaciddooda, baaskiilkan e iibka ah wuxuu sidoo kale bixiyaa shaashad LCD leh xogta rasmiga ah ee waqtiga dhabta ah.
2. Baaskiil koronto ah oo 26-inji ah
Qof kastaa wuxuu ku raaxeystaa madadaalo badan dariiqyada magaalada oo leh baaskiil elektiroonig ah. Ugu horreyntii, kani waa baaskiil heer sare ah oo iib ah. Waxaa loo dhisay inuu iska caabiyo safarka magaalada ee kala duwanaanta kala duwan iyo waliba buuraha. Iyada oo la adeegsanayo naqshad tallaabo-tallaal oo caadi ah, waxay umuuqataa mid ku fiican xaalad kasta. Qalabka aluminium ee aluminiumku ma aha oo kaliya miisaan fudud laakiin waa mid aad u adag oo waara, xitaa marka baaskiil koronto lagu daayo banaanka. Baaskiiladan magaalada ah ee iibka ah waxay la imaaneysaa bareeg farsamaysan oo tayo leh iyo 21 gear oo fuulitaan fudud. Marka la isku daro, kuwani waxay ku siinayaan dardar deg deg ah, isteerinka saxda ah, iyo joogsiga nabdoon.
Sidoo kale adoo adeegsanaya naqshad batari qarsoon oo leh batroolka 36v 10ah laga saari karo, batteriga ayaa gabi ahaanba shaqeynaya 4-6 saacadood, taas oo lamid ah dhammaan baaskiillada oo baaskiilku ku safri doono qiyaastii 40km ilaa 60km hal lacag oo keliya. Waxay ku qalabeysan tahay xawaare sare oo xawaare sare leh oo dhan 350W, kaas oo kuu oggolaanaya inaad u safarto xawaare 30km / h max ah, oo aan lahayn wax isbeddello ah oo bir-jaris ah.
3. 26 ”baaskiil koronto taayirrada baruurta leh
Ma waxaad raadineysaa baaskiil koronto oo waara oo culus? Maxaad tan u dooran weyday. Qalab badan oo si fiican loo dhisay, baaskiilkan iibka ah wuxuu leeyahay dabeecad iyo qaab mana ka baqaayo inuu tuso. Taayirada 26 * 4.0 inji waxay soo bandhigayaan tan xajin ah oo kaa ilaalin doona inaad koorsada ka dhigto shub siman ilaa waddooyinka quruuruxa. Aluminiumka aluminiumku wuxuu ka dhigayaa baaskiiladan e qurux badan oo fudud oo si adag u xiran, dhammaantood isla waqtigaas. Tuujinta suulka iyo 21 gear oo kaa caawin doona inaad ku hesho xawaare ugu sarreeya illaa 30-40km / saacaddii. Awood sare iyo awood balaaran ayaa ah taayirrada dufanka badan ee baaskiilka korantada leh mid ka mid ah muuqaalka, la imow 350w ilaa 750w matoor aan burush lahayn iyo 36v ilaa 48v batari lithium laga saari karo.
Haddii aad rabto inaad wax dheeraad ah ka ogaato waxyaabaha ku saabsan baaskiilka e-iibiye ee iibka ah, waad baari kartaa maqaallo hore ama booqan karaheenna Websiteka rasmiga ah, sidoo kale farriintaada hoos ayey uga bixi kartaa.
Tags:e baaskiil iib ah baaskiil e e caan ah
Ka hor: Waa maxay bushkuleeti ka caawisa korantada?
Next: 4 sababood awgood dadku waxay doorbidaan baaskiil wadayaasha korantada